Mutoro weVakuru Unotarisirwa | Online Certification Chirongwa chekushanda neVana
Mutoro weVakuru Unotarisirwa
Online Certification Chirongwa chekushanda neVana
Iyi 20 awa yeyunivhesiti yekudzidzira pamhepo inoita kuti vanotsvaga basa vawane hunyanzvi hunodiwa kuti vashande nevana munzvimbo dzine marezinesi ekuchengeta vana kana zvikoro muCB.
Kuburikidza nezvikamu zvinofambidzana, iyo Online Inomiririra Adult Course inovhara zvakakosha pfungwa nezvekuvandudzwa kwemwana kubva pakuzvarwa kusvika kune 12 makore ezera, mwana nhungamiro, hutano, kuchengetedza uye hutano.
Hurumende yeBritish Columbia parizvino yakaraira kudzidziswa kweVakuru Vakawanda kosi kune vese vanhu vanoshanda nevana.
Iyi Online Inomirira Adult kosi inosangana iyo BC Vana Chengetedzo Yekuchengetedza rezenisi zvinodikanwa kuti vanhu vakwanise kuva nemaawa mashoma e20 ekudzidziswa kuchengetedza vana kusanganisira kuchengetedzeka, kusimudzira mwana uye hutano kuitira kuti ashande nevana.
Yedu Inotarisirwa Vakuru Kosi yepamhepo kudzidziswa inokodzera vanotsvaga basa muCK kuti vawane ruzivo rwakakodzera pakushanda nevana. Chikamu chakanakisa ndechekuti kosi yacho inozvibata poga. Vadzidzi vanogona kutanga kosi pazvinenge zvavakwanira, uye pedza kana vakagadzirira. Hakuna muganho wenguva.
Pamubhadharo, vadzidzi vanogashira email yekutambira nemirairo yekunaya. Mudzidzi anogona kubaya chinongedzo muemail kuti atange pane zvidzidzo. Pane maitiro ekudzidzira maitiro mukati mekosi yese, uye yakawanda sarudzo yekupedzisira bvunzo pakupedzisira. Zvikamu zvese zvekosi zvinopedzwa online, uye hapana mamwe mabhuku ebasa anodiwa.
Mushure mekupedza bvunzo yekupedzisira, vadzidzi vanozotumirwa email gwaro rekupedzisa, iro rinogona kushandiswa kuwana basa munzvimbo dzine marezinesi ekuchengeta vana.
Yedu paInternet Inotarisirwa Vakuru Kosi inotsigirwawo neBasaBC. Izvi zvinoreva kuti mari yehurumende inogona kuwanikwa kuburikidza nenzvimbo dzevashandi kuti vatore kosi iyi. Vanyoreri vanofanirwa kuve vanoshanda basa vanotsvaga basa uye vanyore kuti vave vatengi venzvimbo yavo yemabasa. Shanyira zvedu Mari Yehurumende peji kuti uwane rumwe ruzivo.
Mutoro weVakuru Unotarisirwa Unowanikwa
mune anopfuura 100 Mitauro
Tora iyo Online Inotarisirwa Vakuru Vakuru Kosi muMutauro Wesarudzo yako!
Shandisa Google Chrome Browser,
uye tinya panzira yekududzira orange
pamusoro peji chero.
Iwe unogona kusarudza kudzidza iyo online online mumutauro waunofarira.
Dzvanya Batanidza pazasi Kuti uone Kosi muMutauro Wako
Anotarisirwa Vakuru Kosi Vhidhiyo
Roxanne Penner ndiye muridzi we4Pillar Early Kudzidza Center muPowell River, BC.
Iye anopihwa rezinesi ekutanga Diki Dzinodzidzisa, mufambisi wemusangano uye mudzidzisi weECE.
Iyewo anoshanda semurairidzi wemhuri uye anga achishanda somubereki wekurera kuburikidza neUshumiri hweVana uye mhuri kweanopfuura makore 17.
Roxanne anga achidzidzisa hunyanzvi hweMutoro weVadzvanyadzo kosi kuburikidza neye-munhu musangano kweanopfuura makore 10.
Iye zvino kosi iyi inowanikwa online kune avo vane hurongwa kana nzvimbo isingavatenderi kubva kutora iko iko kudzidza.
Yedu Inotarisirwa Yechikuru Vakuru Kosi inotorwa online mune dzakatevedzana yezvidzidzo ne mini quizzes. Kosi yacho yakazara pachayo. Vadzidzi vanogona kutanga chero nguva, uye kutora bvunzo yekupedzisira kana vakagadzirira. Panopera kosi, vadzidzi vachatora online rakavhurika bhuku rekupedzisira bvunzo, uye vanozotumira email gwaro rekupedza. Kupfuura mucherechedzo 70%, uye bvunzo dzinowanikwa kuti utorezve kusvikira danho rapfuura riwanikwa.
Vatori vechikamu vanofanirwa kuve vanosvika makore gumi nemana e19 kunyoresa, kupedzisa zvese zvidzidzo uye kupasa bvunzo yekupedzisira paine mucherechedzo unogutsa kuitira kuti ugamuchire Responsible Adult Course chitupa chekupedza.
Ndokumbira utarise, murayiridzi Roxanne Penner anozviita iye anowanikwa neemail panguva yako yekosi kupindura chero mibvunzo iwe yaungave unayo.
Inotarisirwa Vakuru Kosi Yenyaya
The Online Inotarisirwa Adult kosi yaive yakapfava kunyoresa kupinda uye kupedzisa! Kubva kutanga kusvika pakupedzisa kosi iyi inodzidzisa uye yakapusa yekutevera pamwe.
Roxanne semurairidzi ave akanaka! Akadzoka kumaemail angu nekukurumidza uye aigara kuwanikwa kuti apindure mibvunzo yangu kana paine chero.
Chandinoda zvakanyanya pamusoro penyaya ndeye mukudzika kwayaive yakaita. Izvo zvinotopfuurira pamusoro pekushanda nevana vane hutano hwakasiyana zvinodiwa, izvo ini ndinofunga kuti zvakakosha kune chero munhu anopinda mumunda.
Mushure mekupedza iyo Responsible Adult kosi uye kutora bvunzo ini ndinonzwa ndine chivimbo kuti ndichave kugona kuita pabasa rangu idzva nekunzwisisa kuri nani kwekuva munhu mukuru anoshanda.
Mushure mekupedza Inotarisirwa Yechikuru Adzi kosi mudzidzi anokwanisa kushanda na:
Chikoro Chemuboka Revanhu Chekuchengeta Vana (vane marezinesi)
Pano neapo Vana Chekuchengeta (rine marezinesi)
Sokutsiva kana chinzvimbo / chinzvimbo pakudaidzwa kweVanobetsera Kune Vacheche Dzidzo Yevanodzidzisa muLayisensi dzeVana Vanochengetedzwa Kwevana kana maPreschools
Casual mhuri Kudonhedza-Mu Zvirongwa, Mhuri Yekuchengeta Vana Vabatsiri kana zvimwe zvakanangana nzvimbo
Kutanga Nzvimbo Yezuva Rekuchengeta Mhuri
Nanny kana Babysitting
4Pillar Kutanga Kudzidza kunodada kupa 100% Kugutsikana Guarantee pane yedu Online Inotarisirwa Vakuru Kosi.
Kana nekuda kwechimwe chikonzero iwe usiri kufara nekudzidziswa, isu tichakupa mari yakakwana kutenga yako.
Ndokumbira utarise, gwaro rekupedzisa harisi kuzopihwa kuti ridzoserwe zvidzidzo.
Zvimwe Zviono ZveMudzidzi
Ini ndinokurudzira kwazvo Roxanne Penner semurairidzi weiyo Responsible Adult kosi.
Iye anonyatsodzidzisa uye anodisa murayiridzi anofarira chaizvo munda waanoshanda mairi. Zvaifadza kubatana naye.
Ini ndakatora iro raCustomer Adult kosi ndokuwana riine ruzivo. Roxanne Penner akaita kuti makirasi anakidze uye kudzidza kuburikidza nemhando yake yekudzidzisa yaive yemhepo.
Ini ndaikurudzira zvakanyanya kusaina kunyorera iyi kosi.
Iyo Inotarisirwa Vakuru Vakawanda Kwekosi Course yaive yakanaka yekudzidza chiitiko. Ini ndaida kuti Roxanne awanikwe kupindura chero mibvunzo yandaive nayo munzira.
Ini ndakagamuchira chitupa changu nguva pfupi mushure mekupedza kudzidza, izvo zvakabatsira panguva yangu kunyorera basa rekuchengeta vana.